दाई भन्दै घरमै आउने छोरीको आमालाई श्रीमानले लिएर हिँडेपछि श्रीमती परिन् मु’र्छा,समाज कता जाँदैछ? (भिडियोसहित) – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
दाई भन्दै घरमै आउने छोरीको आमालाई श्रीमानले लिएर हिँडेपछि श्रीमती परिन् मु’र्छा,समाज कता जाँदैछ? (भिडियोसहित)
काठमाडौं ।छिमेकमै बस्ने विवाहित महिला श्रीमानलाई दाई भन्दै आउँथिन् । आफुलाई पनि भाउजु भन्थिन् । छोराछोरी खेलाउन आफ्नै घरमा लैजान्थिन् । दाई बहिनी जस्तो पवित्र नातामा उनले कहिल्यै शंका गरिनन् । छिमेकी महिलाका श्रीमान विदेशमा थिए ।त्यसैले उनले घरमा एक्लै भएकाले आफुसंग कुराकानी गर्न आएको भनेर खुसी नै थिइन् । स’मय वि’त्दै गयो तर आफुलाई भाउजु भन्ने महिला नै अहिले आफ्ना श्रीमानसंग भागेको थाहा पाएपछि उनी छाँगावाट खसे’जस्तो भएकी छन् ।
Previous जन्मदिने आमासंग बस्ने भए सचिन परियार ! सचिनको पैसा देखेर आ’इस भन्नेलाई आमाले दीइन क’डा जवा’फ (भिडियोसहित)
Next पि’डामा परेका सबैको घाउमा मल्हम लगाउँदै आएका चर्चित सञ्चारकर्मी सन्तोष देउजालाई के भयो यस्तो ? (भिडियो’सहित)